ရေအခမဲ့အတွက်အခွန်အကောက်မရှိသည့်ရေအတွက် 500ml Vacuum Stainless Steel Marble Textile Flask ကိုဝယ်ပါ WoopShop®
ရေသည် 500ml ဖုန်စုပ်သံမဏိစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအသွေးအရောင်ဘူး
$20.61 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $29.03
အရောင် 1234567 8 9
500ml / 1 500ml /2500ml /3500ml /4500ml /5500ml /6500ml /7500ml / 8 500ml / 9
500ml / 500 ရေအတွက်ဖုန်စုပ်သံမဏိစကျင်ကျောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရေဘူး backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပါးစပ်ပုလင်းသွပ်: Lid နှင့်အတူ
anti-ချေး Coating: ပစ္စည်းကရိယာ
ရေ Bottle သအမျိုးအစား: ရနှေးအိုး
အရောင်ကလှတယ်၊ အလေးချိန်လည်းကောင်းတယ်။ အလွန်ကျေနပ်! အလွန်လျှင်မြန်စွာရေကြောင်း!
ငါ Sweal ပုလင်း (မူရင်း) ကိုဝယ်ပြီးငါ့နိုင်ငံသို့မပြန်မီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ယင်းကိုမေ့ခဲ့သည်။ ငါ AX ဆီကနောက်ထပ်ပုလင်းတစ်လုံးကိုငါမှာလိုက်တယ်။ ငါဘာရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုရောက်လာတယ်။ ငါတကယ်ကျေနပ်တယ်။ ရေကိုနာရီအအေးခံခြင်း၊ ပထမတစ်ခုရောက်လာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်မိသားစုသို့ ၄ ထပ်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အော်ဒါတစ်ခုစီသည်မြန်ဆန်စွာရောက်ရှိလာပြီးဒီဇိုင်းများသည်ဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ အရည်အသွေးကောင်းပုလင်းကြည့်
la imagen en Igual que Llegó muy pronto ။ Buen vendedor